दिन Inn पटोंग बीच3* (थाईल्याण्ड, फुकेत): होटल, सेवा, समीक्षा को विवरण
आजकल मानिसहरू संसारको मात्र टिभीमा छैन थाहा छ। तिनीहरूलाई थुप्रै सुन्दर रिसोर्ट मा स्थित छ, आफ्नो बिदा घर देखि टाढा खर्च गर्न रुचाउँदैनन्। होने टर्की र मिश्र मा भएको, उनि भन्छन्, स्वाद गए।
र अब, छुट्टी लागि प्रतीक्षा, नयाँ यात्रा विकल्प लागि, हेर्न अन्त सम्म, अनमोल देश, जहाँ एक वर्ष तीन पटक, बाली काट्ने ripens, जहाँ समुद्री तट खुसी विदेशी सेतो बालुवा र फिरोजा समुद्र गहिराई मा मीटर दसौं द्वारा हेर्न छ हो यो भेटाउन छैन। तिनीहरूले ताव सोधेर गुगल छन्: «कसरी थाईल्याण्ड उड गर्न"?। प्रश्न विशुद्ध व्यावहारिक, तर यो चिन्ता केही सङ्केत अंदाजा छ। निस्सन्देह, यो नक्शा देख्यो सोध्नुहोस्।
"गुगल" सधैं बुद्धिमानी हो। एक पर्यटक उडान पूरा, विमान, तीन समय क्षेत्र को लागि पार गर्न। यो मास्को भूमि देखि एक यात्रा बारे9घण्टा constituting वास्तविक उडान समय, artificially6घण्टा कम मुस्कान भन्ने हो। पर्यटक, थाईल्याण्ड उड गर्न कति को बस चिन्तित प्रश्न, यो सामान्यतया तल settles र उपयुक्त भ्रमण खोज्न थाल्छ।
फुकेत मा बिदाहरू
अद्वितीय रिसोर्टमा संभावित र विकसित पर्यटक पूर्वाधार फुकेत छ। यसलाई मा स्थित छ को अंडमान सागर थाईल्याण्ड को पश्चिमी तट नजिक र तीन पुल द्वारा मुख्य भूमि जोडिएको छ। यहाँ विश्व, लामो र एक अद्वितीय सेतो बालुवा ढाकिएको मा सबै भन्दा लोकप्रिय समुद्र तट केही छन्।
सबैभन्दा पर्यटकहरु किनभने यसको तटों मा छुट्टी को केवल मुस्कानहरूको को भूमि उड। आफ्नो नाम - पटोंग (सम्पूर्ण उपायको रूपमा नै नाउँ वहन जो), काटयो, Karon बीच, काटयो Noi, Nai हान - विभिन्न देशका नरम संगीत जस्तै mellifluous गर्मी आगंतुकों। को "stardom" होटल तिनीहरूलाई लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दैन। जवान पर्यटक सबैभन्दा भ्रमण आफ्नो पैसा लगानी, एक सस्तो होटल मा भ्रमण खरीद।
बीचमा वर्ग ट्याक्सी ( "टोयोटा" पालकी), तिनीहरूलाई 1,000 भाट खर्च हुनेछ जो मानक होटल शटल अपेक्षा Flown। एक लोकप्रिय होटल परिसर, आधारभूत स्पा सेवाहरूको एक सभ्य स्तर प्रदान, दिन Inn पटोंग बीच3* छ। यसको बारेमा टिप्पणी मैत्री र कृतज्ञ छौं। स्थानान्तरण उहाँलाई अघि 40 मिनेट लाग्छ।
र भ्रमण को आकर्षक मूल्य: एक डबल कोठा मा आवास को लागि शक्ति बिना5दिनको लागि2वयस्क बस 13221 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ।
द्वीप को ट्रपिकल मनसुन जलवायु (मई देखि अक्टोबर गर्न) मौसम (नोभेम्बर अप्रिल गर्न) ड्राई उपस्थिति र भिजेको निर्धारण गर्छ। यसरी अंडमान राउन्ड पानीमा पौडी लागि उपयुक्त र हावा तापमान लगभग वर्ष भर नै छ। सबै भन्दा उत्तेजक महिना - अप्रिल - अक्टोबर - - यसलाई माथि 28.5 ° C र coldest उदाउँदैन यसको मूल्य 26.8 ° C छ
सूखी, वा उच्च सिजन रिसोर्टमा पर्यटक अधिकतम द्वारा भ्रमण द्वीप मा। जनवरी - आफ्नो आकाश को शिखर आश्चर्यजनक सफा, मौसम सुन्दर छ, र मूल्यहरु दुगुना छन्। पटोंग, होटल तिनीहरूलाई बीचमा र दिन Inn पटोंग बीच 3, लगभग क्षमता गर्न भरियो।3महिनाको लागि - यो समयमा यात्रा अग्रिम किनेको गर्नुपर्छ।
फल लागि पर्यटन र कम मूल्यहरु को खरीद मा एकदम पर्याप्त छुट: फुकेत मा वर्षाको सिजन पनि यसको "फाइदा" छ। र थाईल्याण्ड मा वर्षा छैन त लामो छ, तिनीहरूले राति जाने गर्छन। मात्र 40-60 मिनेट - आफ्नो अवधि सामान्यतया सानो छ। यस मामला मा, हावा तापमान बीच 20-27 ° C छ, र समुद्र अविश्वसनीय न्यानो छ। समशीतोष्ण अक्षांश धेरै बासिन्दा रुचि ट्या मा आराम गर्न वर्षाको सिजन छ।
पटोंग एक सुविधा शायद neokeanicheskih रिसोर्ट्स मा छैन, जो अर्को climatic कारक छ। यो छालहरू उचाइ छ। जुन मा - उचाइ को खुला पानी मा अगस्ट तिनीहरूले bathers खतरनाक पुग्न। त्यतिबेला पर्यटकहरु पौडी खेल्न बोर्ड मा उनलाई माथि सार्नुहोस् र गर्न रुचाउँदैनन्।
लघु होटल दिन Inn पटोंग बीच3* - यो पटोंग को हृदय मा स्थित छ। आफ्नो लाइसेन्स प्लेट कोष 70 कोठा को कुल समावेश छ। तिनीहरूले समीक्षा द्वारा न्याय भरोसायोग्य छन् फिनिस व्यवसायी बोल्न। कर्मचारी पाहुनाहरूलाई आफ्नो ठाउँ र देखाउन हेरचाह मोल। पर्यटक आकस्मिक अंतर रहन्थ्यो: अधिक अमेरिकी र यूरोप, भन्दा चिनियाँ, कम रूसी, युक्रेनी।
होटल बच्चाहरु संग छुट्टीको लागि डिजाइन गरिएको छैन, उहाँले वृद्ध मान्छे को लागि उपयुक्त छ। आगंतुकों बाहिरै लागि आफ्नो आकर्षण, अत्यन्तै लाभप्रद स्थान छ। उहाँले युवा कम्पनीहरु रोजेका छ। होटल जटिल को पैदल दूरी मा उज्ज्वल र जीवंत छ, 18:00 को रिसोर्ट को केन्द्रीय सडक पछि पैदल - को 350-मीटर Bangla सडक, नाइटलाइफ को हृदय।
जब तपाईं होटल मा जाँच कुनै जम्मा आवश्यक बताए।
होटल जटिल को पूर्वाधार एक छत, बगैचा, आउटडोर पूल, रेस्टुरेन्ट, बार समावेश छ। होटल सामान, शुष्क सफाई, लाँड्री लागि क्यामेरा सञ्चालन। यसको क्षेत्र उपलब्ध छिटो वाइफाइ छ। मेहमान स्वागत मा फ्याक्स र सुरक्षित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, व्यावसायिक यात्री - यो सम्मेलन हल को प्राविधिक सक्षमता।
सान्त्वना "3 +" स्तर यसको अतिथि दिन Inn पटोंग बीच3* प्रदान गर्दछ। होटल सेवा, मनोरञ्जन रूपमा घडी स्वागत वरिपरि काम, नियमित राम्ररी सफाई र ओछ्यान तन्ना र तौलिया, यात्रा बिक्री, स्वास्थ्य मालिश र जक्यूजी, अवैतनिक बिलियर्ड्स को समसामयिक प्रतिस्थापन implies बाल हेरविचार भुक्तानी। छोटो मा, होटल मुद्रा को लागि उत्कृष्ट मूल्य देखाउनुहुन्छ।
पाहुनाहरूको अनुसार, स्वागत कर्मचारी ध्यान, मायालु। ग्राहक अनुरोध सधैं वास्तविक समयमा कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कर्मचारी - एक अंग्रेजी र रूसी भाषा बुझ्न छैन। पर्यटकहरुका लागि, सीमित अंग्रेजी, stalemate संचार बाहिर तरिका "गुगल" -Translator ट्याब्लेट प्रयोग मा निहित।
आफ्नो समीक्षा पाहुना तिनीहरूले दिन Inn पटोंग बीच3* द्वारा प्रदान जीवित अवस्था मनपर्ने सहमत हुनुहुन्छ। कोठा उहाँलाई (र मानक र डिलक्स) प्रकार अर्थव्यवस्था गुणस्तर कारक गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, कुनै "हिल्टन Arcadia" छ। तर, कोठा विशाल हो, र यसको डिजाइन impeccable छ। त्यहाँ एक ड्रायर र एक बाथरूम संग एक बालकनी छ। यदि पर्यटक को प्रारम्भिक बन्दोबस्त रुचि थिएन (उदाहरणका लागि, त्यहाँ Windows बिना केही कोठा छन्), यो त स्वागत को कर्मचारी सूचित गर्नेछौं, र यो लगभग तुरुन्त पुनर्स्थापित।
दुई कुर्सियाँ, बिस्तर टेबल दुई एकल बेड वा एक डबल बेड, एक दराज, तालिका,: कोठा फर्नीचर को एक सेट संग प्रदान गरिन्छ। वातानुकूलन, टेलिभिजन, छोटा पल्ट, हेयर ड्रायर, शवर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। पानी बाथरूम स्थिर, सधैं नल मा तातो र चिसो चलिरहेको पानी छ।
"सुत्ने र बिहानको खाजा" - दिन Inn पटोंग बीच3* मा भ्रमण को मूल्य मात्र मात्र विकल्प खाना भुक्तानी पनि समावेश छ। यो होटल रेस्टुरेन्टको पाहुनाहरूको कसरी व्यवहार छ। पाहुनाहरूको अनुसार, खाना स्वादिष्ट छ, तर एक बिट monotonous। को नास्ता मेनु फरक टोष्ट (छम, ससेज, ससेज, पनीर को दुई प्रकार), अन्डा, कफी, चिया, दूध, भुईँकटर, खरबुजा, केरा, मेवा। सुसमाचार पर्यटकहरु आफूलाई आफ्नो स्वाद मा आफ्नै नास्ता किनेको छ।
सस्ती क्याफे र रेस्टुरेन्ट मा भोजन र खाने अतिथि पटोंग भर छ। साथै, तपाईंले एक स्वादिष्ट भोजन, सडकमा एक स्थानीय छिटो खाना खरीद (यद्यपि, प्रतिष्ठा बिक्रीको एक विशेष बिन्दुमा परामर्श पछि) हुन सक्छ।
घामले डढाउने काम रही कुनै एक प्रतिरक्षा छ देखि - पर्यटकहरूको थाईल्याण्ड को ट्रपिकल सूर्य सावधानीहरु लिन बाध्य अन्तर्गत आराम, अक्षांश समशीतोष्ण। यस को लागि, तिनीहरूले राम्रो छ पटोंग को रिसोर्ट मा किन्न गुणस्तर sunblock, मा skimp छैन। स्थानीय सुरक्षा स्तर इच्छित सूचकांक SFF क्रीम पुग्छ - 70, एउटै दबाइ तर घरमा खरिद 30 एकाइहरु पुग्न, यो बल्न देखि सुरक्षा गर्दैन। यस मामला मा, क्रीम प्रति शरीर 3-4 पटक लागू दिन पटोंग मा खरिद गर्नुपर्छ। तपाईं चाहनुहुन्छ के - उष्ण कटिबन्धीय ...
समुद्र देखि तेस्रो लाइन, होटल स्थित छ दिन Inn पटोंग बीच3*। पटोंग बीच मात्र 250-300 मीटर उहाँबाट छ। यो विशाल र हल्ला, रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर र विभिन्न मनोरञ्जन सुविधा को पूर्वाधार विचलता नम्बर हो। उसलाई अनुसार हरेक अब र फेरि विभिन्न शो को लागि टिकट वितरण, विक्रेता scurry। हामी यसको स्पा को सद्गुण कुरा भने, यो पानी turbid को क्षेत्र मा पानी मा एक क्रमिक प्रवेश, तर समुद्र संग, बलौटे छ। पटोंग बीच फोम पार्टी, सभा, चल्छ र मनोरञ्जन सबै प्रकारका लागि आदर्श छ। यहाँ तपाईं जेट स्की लिन वा प्याराशुट मा एक डुङ्गा पछि उड गर्न सक्नुहुन्छ। Sunbathing र सेतो बालुवा र फिरोजा पानी स्पष्ट संग थप उपयुक्त क्षेत्र काटयो Noi र Karun पौडिरहेका लागि।
आदर्श र वीरान (को Bounty को शैली मा), तर सानो समुद्री तट द्वीप को उत्तर मा स्थित lagoons पाउन सकिन्छ।
पटोंग मा Boaters डाइभिङ, सर्फिङ, पानी स्किइङ, माछा मार्ने र नौकायन जाने मौका छ। केही डाइभिङ पाठ वा सर्फिङ किनेको र सास नियन्त्रण वा ब्यालेन्स राख्न को विज्ञान मा सफल भएको, तिनीहरूले नयाँ भव्य शौक प्राप्त। यसको विपरीत, पानी स्की को प्रशंसक - एक पेशेवर डाली। सिक्न यो पाठ को एक जोडी को लागि हुन सक्दैन धेरै गाह्रो छ तिनीहरूलाई एक ब्यालेन्स राख्न।
समुद्र तट मा निरन्तर भलिबल, फुटबल मा अवैतनिक प्रतियोगिताहरु छन्। आफ्नो वातावरण - अन्तर्राष्ट्रिय र बिल्कुल मैत्री।
समीक्षा रूपमा, होटल अतिथि दिन Inn पटोंग बीच3* शारीरिक व्यायाम सजिलै सार्ने कम्पनीहरु रिसोर्ट को रात जीवन भाग लिन पछि समुद्र तट। शहर लोकप्रिय discos Seduction, हलिउड, आइरिस पब, Scruffy मर्फी गरेको, जाने-जाने गुप्त एक पल्ट को केन्द्रीय भाग मा। तट पनि आदर्श पक्षहरूको समातेर लागि उपयुक्त छ। त्यहाँ बारहरू, पबहरूमा र रेस्टुरेन्ट को एक धेरै निर्माण गरिएको छ। सिमोन क्याबरेट क्लब वयस्क पर्यटकहरु उज्ज्वल विशिष्ट शो रम्न (थाईल्याण्ड कि भूल छैन - सेक्स पर्यटन को एक मान्यता केन्द्र), पट्टी बारहरू चलाउनुहोस्।
विभिन्न यात्राहरु अतिथि दिन Inn पटोंग बीच3* (फुकेत) प्रस्ताव छन्। थाई रेशम, को गोही खेत, काजू को कारखाना प्रशोधन, कोरियाली कस्मेटिक्स को केन्द्र को केन्द्र मा Phang Nga, Phi Phi, क्राबी, माउन्ट ठूलो बुद्ध, मछलीघर को द्वीपसमूह छिमेकी द्वीप गर्न एकदम लोकप्रिय यात्रा।
पटोंग मा लुगा र खेल सामान, गरगहना र आभूषण, Swimwear किन्न लाभदायक हुन सक्छ। यी उत्पादनहरु बिक्री पसलहरूमा एकदम धेरै छन्। विशेष तिनीहरूले Megamall "Junceylon" मा पाउन सकिन्छ। खरीदार पसलमा "रबिन्सन" र बजार ठूलो सी ध्यान गर्नुपर्छ
मनपर्ने को अनौठो फल, एक निजी बजार Banzaan किन्न चाहने, अतिथि दिन Inn पटोंग बीच3* लागि ठाउँ। स्मृति चिन्ह रात बजार शाही प्रमोदवनमा भ्रमण गर्नुपर्छ किन्न, 23:00 सम्म 18:00 देखि खुला छ, eponymous होटल नजिकै स्थित छ।
, पनि थाई कम्पनी बाहिर ज्ञात लुगा आदेश बनाउने - "महान् दर्जी फुकेत" RK फैशन र दर्जी, Instyle फेशन Bespoke दर्जी छैन कम लोकप्रिय छ। यहाँ तपाईं आफ्नो स्तरअनुसार आदेश, र अधिक दुई पटक घर, उच्च गुणस्तरीय रेशम शर्ट, सुट पाइन्ट मा भन्दा सस्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
होटल दिन Inn पटोंग बीच3* - विश्व पटोंग को प्रसिद्ध थाई रिसोर्टमा अन्वेषण लागि ठूलो ठाउँ। उहाँले दृढ यसको अतिथि एक चिटिक्क सेवा अर्थव्यवस्था प्रदान, स्पा व्यवसाय यसको आफ्नै आला धारण। यसको स्थान रिसोर्ट को ठाँउहरु अन्वेषण लागि लगभग सिद्ध छ। प्रबन्धकहरू र होटल को मालिक राम्रो व्यापार प्रतिष्ठा छ।
नीलो प्रवाल होटल र Resort (Marsa आलम, मिश्र): विवरण र फोटो
Cynthiana बीच होटल3* (साइप्रस / पेपहस): होटल को विवरण र समीक्षाहरू
बुल्गेरियामा पानी पार्क संग होटल: सबै भन्दा राम्रो बच्चाहरु संग जवान मानिसहरू र परिवारको लागि
कोस्टा ब्रावा, पारा होटल4*: तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
Amphora बीच Resort Suites4होटल: सेवाहरू प्रस्ताव
एक क्लासिक cheesecake कसरी खाना पकाउनु?
कैंची कुञ्जीपाटी: वर्णन, परिचालन सिद्धान्त, फाइदाहरू र हानिकारक
वैकल्पिक चिकित्सा छ - यो सबै अर्थहीन छ?
घर बाल्टिक हिरोइन बाट निस्किन्छ
नदी परिवहन। नदी परिवहन द्वारा यातायात। Riverport
अद्भुत मानिस, "पूल", Noize Mc देखि अचम्मको गीत